LG V35 ThinQ ၏ယိုစိမ့်မှုများ: LG V30S ThinQ၊ သင်ကဟုတ်လား။ | Androidsis
စျေးကွက်ထဲတွင်ပြသခဲ့သည့်အဆင့်မြင့်အဆင့်များထဲမှအချို့ Samsung ၏ Galaxy S9, Huawei P20, နှင့်အခြား LG က, ဖြန့်ချိပြီးနောက် LG က G7 ThinQ နှင့် V30S ThinQ, ယခုနှစ်ကြွင်းသောအရာ၌မဆိုကြွင်းသောအရာယူဖို့ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သော V30S ThinQ ၏ဆက်ခံမည့်အရာအချို့ကိုယိုစိမ့်သောပြန်ဆိုမှုများကဤအချက်ကိုအတည်ပြုသည်။ နောက်လာမည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော LG V35 ThinQ အကြောင်းပြောကြသည် ဆု တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီထံမှ.
ဒီဖုန်း အောက်တွင်တွေ့ရမည့်ဒီဇိုင်းအရ V30S ThinQ နှင့် ပတ်သက်၍ သိသာသောပြောင်းလဲမှုများကိုတင်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းအတွင်းပိုင်းအဆင့်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ကောလဟာလများနှင့်သံသယများအရမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤ terminal သည် hardware အပိုင်းကဏ္sectionတွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုစွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့နိုင်ပြီးကင်မရာနှင့်ပတ်သက်သောအခြားတိုးတက်မှုများကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ပိုကောင်းပြီးပိုအားကောင်းတဲ့ဖုန်းအကြောင်းပြောနေတာသေချာတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG V35 ThinQ ၏ပြန်ဆိုချက်များအရ၎င်းသည်ဖုန်းအသစ်မဟုတ်ဘဲ V30 ThinQ ထက်တိုးတက်မှုဟုဆိုနိုင်သည်။ ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Mobile World Congress တွင်ဖေဖော်ဝါရီလကတင်ပြခဲ့သည်။
ငါတို့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း ဒီမိုဘိုင်း၏နှစ်ဆကင်မရာ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို LG V30S ThinQ နှင့်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကဲ့သို့တူညီစွာနေရာချထားခြင်း။ ဤအတောအတွင်းရှေ့ panel အတွက်မူ၎င်းကိုအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောဘေးအနားများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများကအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထူနှင့်အတူတူပင်အထူ၏အောက်တွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
တူညီသော၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း, ၎င်းသည် ၆ လက်မ FullVision OLED နည်းပညာဖန်သားပြင်နှင့်အတူရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် 6: 18 အချိုးအစားနှင့်ထပ်တူကျသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုအစွမ်းထက်သော SoC မှစွမ်းအားဖြင့် ... LG G845 ThinQ တွင်တွေ့ရသောရှစ် core Core Qualcomm Snapdragon7SoC အကြောင်းပြောကြသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 32-bit high-definition Quad DAC အသံစနစ် (ESS Saber 9228 chip) နှင့်ဝေးကွာသောအသံအသိအမှတ်ပြုမှု (SFFVR) စွမ်းဆောင်ရည် ၅ ဒီဂရီပါရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG V35 ThinQ ၏ယိုစိမ့်မှုများ: LG V30S ThinQ၊ သင်ကဟုတ်လား။